Ukuvuselelwa kwe-COVID - IGalveston County Food Bank
IGalveston County Food Bank nozakwethu bayizinsizakalo ezibalulekile, futhi kubalulekile ukuthi siqhubeke nokusebenza ngenkathi sisebenzisa izindlela zokuphepha ezingcono kakhulu ezitholakalayo. Ngalezi zikhathi zamanje, siyabona ukuthi ukuvezwa kungaba kakhulu 'nini' hhayi 'uma', futhi njengoba siyisakhiwo somphakathi sizobuyekeza lapha ngokushesha nje lapho sazi ukuthi kube namacala aqinisekisiwe abantu abebekhona Ibhange Lokudla. Sifuna ukubonakala ngokusobala ngangokunokwenzeka, ngenkathi singangezi kunoma yikuphi ukwesaba.
Sizoqhubeka nokusebenza, ngenkathi sisebenzisa izindlela zokuphepha ezingcono kakhulu ezitholakalayo.
Siyaqhubeka nokuqapha izindlela zokuphepha, silandela ngokuqinile ukuphepha kwe-CDC kanye nezinqubo zokuhlanza.
Izinyathelo zokuphepha zamavolontiya, izivakashi nabasebenzi:
Siyalandela I-CDC yancoma izinqubo zokuvala inzalo futhi sengeze imvamisa yokuhlanza nokubulala amagciwane, ikakhulukazi ezindaweni ezinabantu abaningi (izindawo zokuzithandela, amalifti, amakamelo okuhlangana, izindlu zangasese, izindawo zokudla).
Bonke kumele bafake izembozo zobuso lapho bengena endaweni yokwamukela izivakashi ye-GCFB.
Amazinga okushisa ayathathwa kuyo yonke iminyango: abasebenzi, amavolontiya kanye nanoma iziphi izivakashi.
Abasebenzi kanye namavolontiya bacelwa ukuthi baqhubeke nokuqhela komphakathi futhi uma bengakwazi kumele bagqoke okokuvala ubuso. .
Amavolontiya asebenza amaphrojekthi wokugcina impahla adingeka ukuthi ageze izandla ngaphambi kokuba amashifu awo aqale, ngesikhathi sekhefu, lapho eshintsha amaphrojekthi nangemuva kokushintshwa kwawo. Amagilavu ​​ayatholakala ukugqoka amaphrojekthi wokugcina impahla. Sithatha namazinga okushisa lapho sifika ..
Abasebenzi bazijwayeza indlela 'yokugeza, yokuhlanza'. Ukwandisa imvamisa yokugeza izandla. Ukuhlanza izindawo zabo zokusebenza kaningi. Amazinga okushisa ayathathwa lapho ufika ..
Zonke izivakashi nabasebenzi bakhombisa imikhuba yokuqhelanisa umphakathi. Isb. Amavolontiya anconywa ukuthi asebenze ngamamitha ama-6 uma kunokwenzeka futhi okungenani ahlukaniswe ubude bezingalo ..
Ukukhuthaza noma ngubani ozizwa engaphilile ukuthi ahlale ekhaya.
Ukuhlanza nokubulala amagciwane:
Lapho / uma icala eliqinisekisiwe livela, isikhala lapho umuntu abekhona sizohlanzwa ngokuphelele futhi silandela izindinganiso ezinconyiwe ze-CDC zokuhlanza nokubulala amagciwane. Abantu abahlangabezane kakhulu nalo muntu bazokwaziswa.
Ukudla akwaziwa ukudlulisa i-coronavirus. Ngokusho kwamuva isitatimende esikhishwe yi-US Food and Drug Administration, “Asazi ngemibiko ngalesi sikhathi yezifo zabantu eziphakamisa ukuthi i-COVID-19 ingadluliselwa ngokudla noma ukupakisha kokudla.”Njengamanye amagciwane, kungenzeka ukuthi igciwane elibanga i-COVID-19 lingaphila ebusweni noma ezintweni ezithile. Ngaleso sizathu, kubalulekile ukulandela izinyathelo ezibalulekile ezi-4 zokuphepha kokudla — kuhlanzekile, kwehlukile, kupheke futhi kuphole.